The Irrawaddy's Blog: ထူးခြားတဲ့ ကြော်ငြာ
ကျိုက်ထိုမြို့နယ် တနေရာမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက တွေ့ရတဲ့ ကြော်ငြာ ဖြစ်ပါတယ်။
နယ်မြေဒေသ အေးချမ်းသာယာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် စည်းကမ်းချက်များလို့ ခေါင်းစဉ် တပ်ထားတာပါ။
ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးများ ဘာသာခြားယူရင် ဒဏ်ငွေ သိန်း ၅ဝ ဆောင်ရမယ် တဲ့။
အမျိုးသားတွေ ယူရင်တော့ ဘယ်လို ဒဏ်ရိုက်မယ် ဆိုတာကိုတော့ ဖော်ပြမထားပါ။
လောင်းကစား၊ ခိုးမှု၊ အရက်သောက်မှုတွေအတွက် ဒဏ်ငွေက ၅ သိန်းလို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အမျိုးသမီးများ ဘာသာခြားယူမှုထက် ဒဏ်ကြေး ဆယ်ဆ သက်သာနေတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်အဖွဲ့ ဘယ်ဌာနက ထုတ်ပြန်တဲ့ စည်းကမ်းချက်လဲ ဆိုတာကိုတော့ မသိရပါ။
ဒီကြော်ငြာဟာ ဒေသတချို့မှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကို ထင်ဟပ်နေပါတယ်။
ဒီလိုကြော်ငြာမျိုး ဘယ်လောက် ရှိမယ် ဆိုတာ မသိရပါ။
အကဲဖြတ်နိုင်ဖို့ ကြော်ငြာပုံကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Posted in: blogger Lay Wah , ထွေထွေရာရာ
ဒီကြော်ညာဟာ ဆရာတော်က သူတို့ဒေသကလူတွေကို တိုးတက်စေချင်လို့လမ်းညွန်ချက်ပေးတဲ့သဘောပါ။ မူဆလင်တွေကို တိုက်ခိုက်ပါ၊ မူဆလင်တွေဟာ မကောင်းတဲ့လူတွေပါလို့ မပြောပါဘူး။ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ မိန်းကလေးတွေ တော်တော်များများ မူဆလင် ယောက်ကျားတွေကို ယူပြီးတဲ့နောက်မှာ ဘုန်းကြီးတွေကိုတွေ့လို့ လက်အုပ်ချီတာကို မူဆလင် ယောက်ကျားလုပ်တဲ့မြင်လို့ တိရိစ္ဆာန်တကောင်လို မူဆလင် တမိသားစုလုံးက ဝိုင်းရိုက်တာကို ခံရတယ်ဆိုတာ မြို့တိုင်းရွာတိုင်းမှာ တွေ့နေရလို့ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ မိန်းကလေးတွေ အကာအကွယ်ပေးဖို့ ကြိုးစားတာပါ။
မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ ယောက်ကျားလေးနဲ့ညားတဲ့ မူဆလင်မိန်းကလေးတွေ မှာ အဲဒီလိုဘာသာရေးအရညှင်းပန်းခံရတာ မရှိသလောက်နဲပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ယဉ်ကျေးတဲ့ မူဆလင် အသိုင်းအဝန်းမှာတော့ ဒီလို နှိပ်စက်မှူ့က မရှိပါဘူး။ ပြသနာက ယဉ်ကျေးတဲ့ မူဆလင်က အရည်အတွက်နဲနေလို့ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာအများစုက မူဆလင်ကို လူရိုင်းတွေ နိုင်ငံခြားသားတွေလို့ အထင်မှားကုန်ကြတာပါ။
In these days, monk doesn't practice what monk should and talking craps... Do they even deserve to be treated as monk? Only people with no brain will blindly listen and get brain washed by this kind of stupid thinking...I am not Muslim, Myanmar people hating Muslim people so much as started talking all these craps and becoming like those extremist from middle east and taliban... What's the difference between those extremist and you people when you become one of them...
ပင်းတယသား said... :
ဒါက ကိုယ့်လူတွေကို ရောက်မလာသေးတဲ့ဘေးကို ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ဂရုဏာကြီးစွာဖြင့် သတိပေးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။
အရက်သောက်ခြင်းက 'ကိုယ့်အကုသိုလ် ကိုယ်သာခံ'လေ လူပေါင်းမှားရင်တော့ အားလုံးထိခိုက်တတ်လို့နေမှာပါ ။ ဒါ ကျနော်အထင်ပါ။
လူတွေကလူအလုပ်မလုပ်လို့ ဘုန်ကြီးတွေက လူအလုပ်လုပ်နေတာကွ
It is so pathetic and retarted. Only people with no brainer will follow that. Don't use religion asamanipulation tool. People had better follow what lord buddha actually teaches.
We are no difference than those musilm extremist when we become one of extremists.
In addition, Buddha teaches what happened when you do something wrong. It is up to you to follow his teaching or not. Buddha never forces someone to follow his teachings. I believe in Lord Buddha so much. But I do not believe in what this monk trying to do. Lighten up people. Don't be misguided.
i believe this law will be followed seriously.
ဥပဒေစိုးမိုးရေး ဆိုတာ ဒါ ဘဲလား အဘကြီးတို့ ရယ်
Kyaw Naing said... :
ကျေးဇူးကန်းတဲ့ လူမျိုးတွေဟာ မြန်မာ့မြေမှာနေ မြန်မာ့ရေကိုသောက် မြန်မာ့ဆန်ရေစပါးတွေစားနေပြီး မြန်မာလူမျိုးတွေကို သွေးနှောကာ အမျိုးဖျောက်ပစ်နေတာ သိသိသာသာကြီးပါ။ သည်လိုနည်းနဲ့ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ်ထိန်းသိမ်းနေတာ လူမျိုးခြားတွေ အနေနည်း ဘာမှဝင်စွက်ဖက်စရာ အကြောင်းမရှိဘူး။
ဒီလိုတားစရာမလိုဘူး။ ကိုယ့်လုပ်ရပ်တွေအတွက်ကိုယ့်မှာဘဲတာဝန်ရှိတယ်။ ကိုယ်ဘဲခံရမှာ၊ ဘုန်းကြီးက ကိုယ့်တရားကိုယ်ကျင့်စမ်းပါ။
Now,Government sent to jail the monks,demolition of Lal Ti Teim .Sold the our land to China (Northern region )..what is maintain religious and our country????? Uneducated & extremist thought only.....
why do we need to follow this rules?...he is an ordinary monk.... these rules are not rules of order.....not legitimate rules.
လူတွေက ပြောပြောနေကြတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေက ဘာသာခြားနဲ့အိမ်ထောက်ပြုပြီးဘာသာခြားနောက်ကို ပါပါသွားတာ ကိုယ်ဘာသာပေါ်မှာယုံကြည်မှုနည်းလို့တဲ့။ဒီလိုစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်မျိုးသာ ကျယ်ကျယိပြန့်ပြန့် ဖြစ်လာရင်သူတို့တွေ တခြားဘာသာဝင်ဖို့နည်းသွားမယ်လို့ထင်တယ်။ ဒီနည်းလမ်းဘယ်လိုလာမလဲလို့ စောင့်ကြည့်ချင်တယ်။ ဒါကြောင့်ဒီနည်းလမ်း ကျယ်ပြန့်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။